Global Voices teny Malagasy » Tsy Mila Ny Uber (tolotra-taxi) Intsony i Seoul, Saingy Mbola Aza Apetraka Ny Findainao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 04 Aogositra 2014 8:06 GMT 1	 · Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Sendikà, Sivana, Teknolojia, Toekarena sy Fandraharahàna
Noraràn'ny  governemantan'ny tanànan'i Séoul, renivohitry Koreana-Tatsimo ny Uber, tambajotram-pitaterana  malaza izay mampiasa fampiharana finday hifaneraseran'ny mpandeha amin'ny saoferan'ireo fiara ahofa sy ny tolotra “ridesharing” (fiarahana mandeha amin'ny fiara iray). Nilaza ireo manampahefan'i Séoul fa mametraka ny maodelin'ny fandraharahana Uber ho tsy ara-dalàna ireo fitsipika ao an-toerana mikasika ny fisoratana anarana sy ny fiasan'ireo taxi. Hoan'ny Uber kosa, tsy nangina manoloana ireo olany ao Seoul izy. Nampitandrina ny orinasa (Uber) vao haingana fa “mety hidiran-doza ny tanàna raha mbola hijanona amin'ny lasa sy taraiky amin'ny hetsika “mifampizara harena” manerantany.
Maningana amin'ny resabe momba ny Uber ao Seoul ny Bloter.net, habaka mampivondrona mpanoratra gazety sy bilaogera mba hitatitra momba ny teknolojia vaovao. Nitsapa-hevitra [ko] mikasika ny disadisa momba ny Uber ny Bloter.net, ary nahita fa mahatonga azy hanahirana ny mijery ny raharaha eo amin'ny lafiny fijery ara-teknika sy araka ny lalàna fotsiny. Nanazava ny Bloter.net fa ny fandraharahana ara-taxi dia tsy miantraika amin'ireo saofera sy orinasan'ny taxi efa mijoroy ihany, fa miantraika amin'ireo vondrona mpiray tombontsoa, anisan'izany ny fitantanana ny tanàna, ireo sendikà, ary mazava ho azy ireo mpajifa. Tsy niresaka tsy fandoavan-ketra ny Bloter.net fa nanontany raha mahavita “mifampizara harena” tokoa ny Uber.
Nanoratra tao amin'ny youngrok.com, namaly  [ko] ny lahatsoratry Bloter.net ny bilaogera teknolojia iray, izay nilaza fa masiaka loatra ny fiampangana ny Uber.
Mizarazara ihany koa ny hevitr'ireo saofera taxi ao Korea mikasika ny Uber. Nilaza ny sasany fa ny raharaha taxi ao Seoul, izay mahasahana faritra midadasika araka ny tokony izy  [ko], dia tsara amin'izao ahitana azy izao. Ny sasany kosa nilaza ny Uber ho manome tolotra tsara kokoa  [ko] noho ireo vondrona taxi ao amin'ny faritra. Na inona na inona hevitry ny olona momba ny indostrian'ny fitaterana, misalasala momba ny tetikasa vaovaon'i Seoul hametraka fampiharana taxi mitombo isa ao an-tanàna izay mitovy be amin'ny Uber ny ankamaroan'ny mpiserasera Koreana. Mikasika ireo ahiahy rehetra amin'ny raharaha taxi rahampitso ao Korea, maro tamin'ny raharaham-panafintohinana Uber no nampiroborobo ny resaka rafitra taxi misy ao an-toerana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/08/04/62579/
 Nampitandrina : http://www.bbc.com/news/business-28398380
 Manasongadina : http://tech.chosun.com/archives/14107
 mahasahana faritra midadasika araka ny tokony izy: https://twitter.com/estima7/statuses/483813891248361473